AKHRISO: Mbappe Oo Ka Hinaasay Greizmann, Aragtida Ay Soo Laabashada Benzema Ka Qabeen & Xog Culus Oo Hadda La Helay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaAKHRISO: Mbappe Oo Ka Hinaasay Greizmann, Aragtida Ay Soo Laabashada Benzema Ka Qabeen & Xog Culus Oo Hadda La Helay
AKHRISO: Mbappe Oo Ka Hinaasay Greizmann, Aragtida Ay Soo Laabashada Benzema Ka Qabeen & Xog Culus Oo Hadda La Helay
July 2, 2021 Apdihakem Omer Adam Wararka Ciyaaraha Maanta, PSG 1
Xidhiidhka ka dhaxeeya Kylian Mbappe iyo Antoine Griezmann ayaa lagu soo warramayaa inuu ahaa mid aad uga durugsan wanaaga xilli ay xogo cusubi kasoo baxayaan isku dhacyadii xulka qaranka France ee intii ay Euro 2020 baaqiga ku ahaayeen.
Xulka kusoo guuleystay koobka aduunka ayaa wareega 16-ka kaga hadhay Euro iyaga oo ku baxay gacmaha Switzerland kaddib markii ay hoggaan 3-1 ah 1-kii daqiiqo ee ugu dambeeyay lumiyeen isla markaana rigoorayaal lagaga adkaaday.
Les Bleus ayaa loo arkayay xulka ugu cad-cad ee koobka ku guuleysan kara 11-ka bishan July balse ka hadhitaankooda tartanka ee lama filaanka ah ayaa sababay in saxaafada dalkaasi ay banaanka keento xurgufihii hoose ee qolka labiska ka jiray.
Mbappe oo ahaa xiddigii khasaariyay rigooradii ay kaga hadheen tartanka ayaa sida ay saxaafada France sheegayso udub dhaxaad u ahaa qalalaasaha ka jiray xulka dhexdiisa.
Xiddigaha waaweyn ee xulka ayaa la sheegay inay kaga cadhoodeen da’yarkaas sidii uu ula dhaqmay Olivier Giroud oo ay isku dhaceen kahor bilaabashada Euro.
Sida uu sheegayo wargeyska L’Equipe, xidhiidhka kala dhaxeeya Griezmann iyo Mbappe ayaa ahaa mid xun, xiddiga Barcelona ayaa ahaa mid laf-dhabar usoo ahaa guulaha dalkaasi tan iyo koobkii aduunka ee 2018.
Warbixinta L’Equipe ayaa lagu sheegayaa inuu Mbappe kaga hinaasay Griezmann iyo sida uu doorka muhiimka ah ugaga ciyaaro xulka tababare Didier Deschamps halka ay sidoo kale aragti kala duwan ka qabeen soo laabashada Karim Benzema.
Mbappe ayaa ahaa midka doonayay soo laabashada Benzema ee xulka halka uu Griezmann rabay in weeraryahanka Real Madrid u maqnaado sidii uu markii horeba uga maqnaa.
Xiddigaha ka cadhooday hab-dhaqankii Mbappe ee Giroud ayay ugu horreeyeen kabtan Hugo Lloris iyo Steve Mandada kaddib markii uu 22 sano jirkaasi dalbaday shir jaraa’id ee uu ugu jawaabayo 34 sano jirka Chelsea oo isagu sheegay inuusan hadalka uu yidhi kaliya Mbappe uga jeedin.
islaantaas tiamaha dabatay yaa hadalkeeda raba ileen 2 games 4 Goals hadu samyn karo Aguerro lalama soo sixiixdeen😉